नेपाली | مدرسة مقاطعة لانكستر
الرئيسية / اكتشف SDoL / تنوع / اللغات / नेपाली
لانكستر को स्कूल जिल्ला मा शिक्षा
لانكستر को स्कूल जिल्ला एक सार्वजनिक विद्यालय सिस्टम छ। हरेक बच्चा कुनै मूल्य मा सार्वजनिक विद्यालय जान सही छ। के لانكستر को स्कूल जिल्ला मा एक बच्चा भर्ना गर्न आवश्यक छ؟ तपाईं विद्यालयमा देख्न सबै मानिसहरू को हुन्؟ के तपाईं एउटा चिन्ता छ भने तपाईंको बच्चा एक समस्या छ जसलाई कुरा गर्छन्؟ के मा उमेर बच्चाहरु सुरु स्कूल ، र स्कूल दिन कसरी लामो छ؟ आफ्नो बच्चा अनुपस्थित हुनुपर्छ भने के गर्ने؟ तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल संक्रमण मदत जवाफ र स्रोतहरू हामी छ।
विभिन्न उमेरका बच्चाहरुका लागि विद्यालय को प्रकार छन्:
पूर्वप्राथमिक: उमेर 4
प्राथमिक विद्यालय: पाँचौं ग्रेड मार्फत 5
मध्य स्कूल: ग्रेड 6-8
हाई स्कूल: ग्रेड 9-12
अमेरिकी स्कूल वर्ष लेट अगस्ट मा सुरु र प्रारम्भिक जुन मा समाप्त हुन्छ। स्कूल वर्षमा، बच्चाहरु शुक्रवार विद्यालय सोमवार उपस्थित। बच्चाहरु शनिबार र आइतबार विद्यालय जाने छैन।
शिक्षक र कर्मचारीहरु
एक स्कूल सबैलाई विद्यार्थी शिक्षित भूमिका खेल्छ। प्रशासक، शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी: यो हाम्रो विद्यालयमा विभिन्न भूमिकाको बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
अंग्रेजी भन्दा पहिलो भाषा अन्य संग विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको अंग्रेजी भाषा विकास कार्यक्रममा सहभागी गरेर आफ्नो अंग्रेजी भाषा कौशल सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी तिनीहरूले ELD सेवाहरू लागि योग्य कि निर्धारण गर्न नामांकन को समयमा मूल्यांकन छन्।
لانكستر को स्कूल जिल्ला केन्द्र 251 दक्षिण राजकुमार सडक मा स्थित स्वागत केन्द्र सबै विद्यालय भवन लागि विद्यार्थी يسجل ، لانكستر ، PA 17603. भर्ना गर्न، कृपया ल्याउन: बच्चाको उमेर प्रमाण، आवश्यक प्रतिरक्षक प्रमाण، र ठेगाना प्रमाण।
आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी थाहा
अमेरिकी स्कूल सिस्टम मा एक बच्चाहरु संग एक अभिभावक ، तपाईँ अधिकार र जिम्मेवारी दुवै छ। थप जान्न तल क्लिक गर्नुहोस्।
एक घर अंग्रेजी भन्दा अन्य भाषामा आमाबाबु वा संरक्षक र आफ्नो रोजाइको भाषामा स्कूल जानकारी पहुँच गर्ने अधिकार छ। भाषा व्याख्याहरु सेवाहरू अनुरोध गर्न، डाउनलोड यस मातृभाषा पहिचान कार्ड، र आफ्नो स्कूलको मुख्य कार्यालयमा उपस्थित।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा، विद्यार्थी हरेक दिन स्कूल जान आवश्यक छ। विद्यार्थी किनभने रोग वा परिवार आपतकालीन को स्कूल सम्झना गर्नुपर्छ भने، लिखित टिप्पणी वा छलफल गरिनेछ अभाव तीन दिन भित्र विद्यालय पठाउन पर्छ "गैरकानूनी।" धेरै गैरकानूनी الغياب अदालत प्रदर्शनमा वा मौद्रिक जरिवाना गर्न सक्छ।
विद्यार्थी पेंसिल्वेनिया स्कूल धाउन क्रममा केही सुइहरु प्राप्त गर्न आवश्यक छ। हामी छोराछोरीलाई हाम्रो प्रदायकहरू मध्ये एक खोप हुन मदत ، तपाईं आवश्यक भएमा ، र तपाईं जो खोपहरु थाहा मद्दत गर्न सक्छ।
घरमा आफ्नो बच्चा समर्थन
तपाईं आमाबाबु रूपमा ، तपाईंले आफ्नो बच्चाको भाषाई र शैक्षिक प्रगति समर्थन कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ، सोच हुन सक्छ। केही रणनीति लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। बच्चा आफ्नो सहयोग र संलग्नता धेरै बढी सफल हुनेछ
फ्नो बच्चा समर्थन
لانكستر को शहर र विद्यालय जिल्ला भाषा विकास، स्वास्थ्य र शरणार्थी स्थिति संग मद्दत गर्न तपाईँको बच्चाको विद्यालय बाहिर संसाधन को एक नम्बर प्रस्ताव। तपाईं मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तरिका को एक सूची लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं मेनुबाट छनौट मूल भाषामा प्रकाशित छ पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साइट अनुवाद गर्न، पृष्ठ को शीर्ष मा ड्रपडाउन मेनुबाट आफ्नो मनपरेको भाषा चयन गर्नुहोस्।
स्कूल को प्रकार
विभिन्न उमेरका बच्चाहरुका लागि विद्यालय हो:
उमेर4(सेप्टेम्बर 1 मा वा पहिले)
छैन आवश्यक छ ، तर लाभदायक
उपलब्ध सिट को सीमित संख्या
पूर्वप्राथमिक लागि लागू
बाल सदन (5)5मार्फत औं ग्रेड
सबैभन्दा प्राथमिक विद्यालय 3:15 बजे मा 8:45 صباحًا र अन्त प्रत्येक दिन सुरु
सबैभन्दा मध्य विद्यालय मा 7:45 صباحًا सुरु र 2:45 बजे समाप्त
मा 7:50 صباحًا सुरु र 3:00 बजे समाप्त हुन्छ।
प्रशासकहरू विद्यार्थी सिकाउन छैन। तिनीहरूले विद्यालयहरूको शुल्क छन्। त्यहाँ प्रशासकहरूले विभिन्न प्रकार छन्:
अधीक्षक: द अधीक्षक सम्पूर्ण स्कूल जिल्ला निरीक्षण।
प्रमुख: जिल्ला प्रत्येक स्कूल स्कूल निरीक्षण गर्ने प्रमुख छ। मुख्य शिक्षकहरू، विद्यार्थीहरू र विद्यार्थीहरूले 'परिवारलाई संचार।
सहायक प्रमुख: प्रत्येक स्कूल एक वा बढी सहायक المدراء स्कूल प्रमुख मद्दत गर्छ जसले छ।
शिक्षक कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरू सिकाउनुहोस्। त्यहाँ शिक्षकहरू विभिन्न प्रकारका छन्:
कक्षा शिक्षकहरू:5मार्फत किंडरगार्टन मा औं ग्रेड، विद्यार्थी सामान्यतया स्कूल दिन को सबै भन्दा को लागि आफ्नो कक्षा शिक्षक संग रहनुहोस्। कक्षाकोठामा शिक्षक सामान्यतया यस्तो पढाइ ، गणित ، सामाजिक अध्ययन र विज्ञान धेरै स्कूल विषयहरू ، सिकाउँछ।
सामग्री शिक्षकहरू: मध्य विद्यालय (ग्रेड 6-8) र उच्च विद्यालय (9-12) ، विद्यार्थी यस्तो अंग्रेजी भाषा कला ، गणित ، विज्ञान ، सामाजिक अध्ययन ، भौतिक शिक्षा रूपमा एक विशेष सामग्री क्षेत्रमा जो विभिन्न शिक्षक ، छ ، कला ، आदि…।
अंग्रेजी भाषा विकास (ELD) शिक्षकहरू: ELD शिक्षकहरू कक्षा र सामग्री शिक्षकहरू संग अंग्रेजी भाषा कौशल पढ्ने ، लेख्ने ، साथै सांस्कृतिक जागरूकता ، बोल्न ، सुन्न विकास गर्न काम।
विशेष शिक्षा शिक्षक: विशेष शिक्षा शिक्षकहरू विभिन्न सिक्ने ، भावनात्मक ، र / वा शारीरिक भएका विद्यार्थीहरूको समर्थन।
शिक्षकहरू बाहेक، त्यहाँ धेरै अन्य विद्यालय कर्मचारी पनि विद्यार्थी र परिवार सहित मदत गर्ने हो:
स्कूल परामर्शदाता: स्कूल सल्लाहकार विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षा भर، कक्षाहरू चयन र कार्यक्रम बनाउन मदत، साथै आफ्नो، सामाजिक भावनात्मक र व्यवहार आवश्यकता मदत सल्लाह। तिनीहरूले पनि विद्यालय र समुदाय समर्थन र संसाधनहरू बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन्।
स्कूल नर्स: स्कूल नर्स बिरामी वा चोट जो विद्यार्थी मद्दत गर्छ।
विद्यालय र परिवार स्रोत विशेषज्ञ (SFRS): स्कूल र परिवार स्रोत विशेषज्ञहरु विभिन्न، सामाजिक व्यवहार، र शारीरिक आवश्यकता विद्यार्थी र परिवार समर्थन। तिनीहरूले घरमा गएर र विद्यालय र सामुदायिक सेवा गर्न परिवार जडान गरेर समर्थन घर / स्कूल संचार मद्दत गर्न सक्छ।
विद्यालय स्रोत अधिकारी (SRO): SROs गर्नेगर्ने र कर्मचारी स्कूल मैदान मा सुरक्षित राख्न मद्दत प्रशिक्षित प्रहरी अधिकारीहरू छन्।
सचिव: स्कूल सचिव मुख्य कार्यालय मा काम गर्छ، र प्रशासकहरूले र शिक्षकहरू संग परिवार जडान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तिनीहरूले पनि आफ्नो बच्चा स्कूल वा अनुपस्थित हुँदा ट्रयाक राख्न सक्छ। आफ्नो बच्चा स्कूलमा हुनेछ यदि तपाईं स्कूल सचिव वा उपस्थिति कार्यालय सम्पर्क गर्नुपर्छ।
अमेरिकी स्कूल सिस्टम मा एक बच्चाहरु संग एक अभिभावक ، तपाईँ अधिकार र जिम्मेवारी दुवै छ।
तपाईं सही छ:
आफ्नो बच्चा स्कूलमा गरिरहेको छ कसरी थाहा
बच्चाको विद्यालय काम र शैक्षिक प्रगति बारे शिक्षकहरू संग पूरा
आफ्नो बच्चा स्कूलमा के सिक्छन् थाहा
आफ्नो बच्चा कठिन समय، देखेर सुनेर वा स्कूलमा सिकेर छ भने सहयोगको लागि स्कूल सोध्न
कागजात अर्थ के तपाईं तिनीहरूलाई साइन इन अघि थाहा
आफ्नो बच्चा मदत गर्न सक्छ के स्कूल कार्यक्रम र गतिविधिहरू उपलब्ध छन् थाहा र
बच्चा स्कूलमा समस्यामा हुन्छ र स्कूल कसरी जवाफ भने थाहा
स्कूल सभाहरू जाने
वा स्कूल कर्मचारी संग बैठक गर्दा भाषा व्याख्या सेवा प्राप्त
तपाईं लागि जिम्मेवार छन्:
बनाउने पक्का आफ्नो बच्चा स्कूल मा समय، तिनीहरूले बिरामी छन् नभएसम्म जान्छ، हरेक दिन
आफ्नो बच्चा बनाउने आफ्नो गृहकार्य हरेक दिन गर्छ
पक्का आफ्नो बच्चा सफा छ ؛ تغذيها؛ सफा लुगा पहनता छ، र राम्रो तरिकाले सोता।
पक्का आफ्नो बच्चा स्कूलमा कार्य कसरी बुझ्नुहुन्छ र शिक्षक गरेका नियम पालना। यी नियमहरू समावेश हुन सक्छ:
बच्चाहरु शिक्षक सुन्न र शिक्षक तिनीहरूलाई यसो भन्छन् के।
तिनीहरूले बोल्न आफ्नो हात उठाउनु।
तिनीहरूले लाइन खडा र विद्यालय सँगै हिंड्न।
तिनीहरूले हिट वा लड्न छैन।
तिनीहरूले अन्य बच्चाहरु खतरामा छैन।
तिनीहरूले खराब शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्।
तिनीहरूले अन्य विद्यार्थी संग काम।
तिनीहरू वर्ग समय हो।
तिनीहरूले गृहकार्य पूरा र विद्यालय यसलाई फिर्ता ल्याउन।
घर मा आफ्नो बच्चा समर्थन
तपाईं आमाबाबु रूपमा ، तपाईंले आफ्नो बच्चाको भाषाई र शैक्षिक प्रगति समर्थन कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ ، सोच हुन सक्छ। यहाँ केही रणनीति हो:
धैर्यवान हुनुहोस्। एक भाषा सिक्दै एक जटिल، दीर्घकालीन प्रक्रिया हो बुझ्न।
नयाँ भाषा मा सिक्ने ऊर्जा धेरै लिन्छ। आफ्नो बच्चा बाँकी प्रशस्त हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
एक शान्त ठाउँ र गृहकार्य र अध्ययन गर्न नियमित समय सिर्जना गर्नुहोस्।
स्कूलमा भइरहेको छ के तपाईंको बच्चाको कुरा।
आफ्नो बच्चाको शिक्षक संग कुराकानी र अभिभावक-शिक्षक सम्मेलन मा भाग लिन।
तपाईं सबै विद्यालय काम देखाउन आफ्नो बच्चा दिनुहोस्।
आफ्नो घर भाषा कायम। दोभाषे हुनुको अद्भुत कौशल छ!
तपाईंको बच्चा संग पढ्न कुनै पनि एक घर भाषामा साक्षरता हस्तान्तरण र अंग्रेजी मा साक्षरता को विकास समर्थन हुनेछ।
परिवार र समुदाय संसाधन
वयस्क / साक्षरता परिषद